Ikhaya » Product » Into eshisayo
• UKWENZEKA NGOKUQHELEKILE - Ikhandlela lethu elibizayo lesiliva elibushelelezi elinesivalo lihlukile futhi lihlala isikhathi eside, liqinisekile ukuthi lizoba yikhaya lakho noma ibhizinisi lakho.
• OKUHLANZEKILE - 100% Umswakama we-Soy Bean ohlwanyelwe ngaphakathi ekhaya - Mahhala kuma-Pesticides, Herbicides, yi-NON-GMO neKosher Certified. • IMVELO - Kuvuseleleka futhi kuboliseke ngokudla okubolayo kusetshenziswa izithako ezisezingeni eliphakeme kakhulu.
• MAHHALA - I-Petroleum, Palm, Paraffin By-Products, ama-Dyes, izithasiselo, i-Phthalates, i-Parabens, i-Pesticides kanye ne-Herbicides, okuqinisekisa ukuthi kushisa okuhlanzekile, okuhle kakhulu.
• I-HANDMADE - Amakhandlela ethu enziwe ngezandla futhi athelwa ngesandla. Siqinisekisa ukuthi zonke izingxenye zethu zitholwe ngokuzibophezela futhi ziyahlangabezana namazinga aphakeme kakhulu.
Isiphathi samakhandlela engilazi emnyama esingu-1pc (D7.3 * H8cm) esinosilika wegolide oprintiwe kanye no-100% weparafini wax, 1pc metal cap (D7.8 * H1cm), isisindo se-wax esingu-160g esinamakha ayi-3%.
CE, RoHS, PSE, ETL, FCC, njll
I-America, i-Europe, i-Australia, i-Middle East kanye ne-Southeast Asia
Imikhiqizo emisha eyi-10 ngeviki
Ukusebenza kwamakhasimende amahora angama-24, ungaxhumana nathi nganoma yisiphi isikhathi:
Ikhwalithi umphefumulo webhizinisi. Yonke imikhiqizo kufanele ihlolwe ngo-100%
Isikhathi siyigolide kuwe nakithi. Ukusebenza ngokuvelele, yenza konke kube lula
ulayini wokukhiqiza ukuhlinzeka ngomkhiqizo wekhwalithi ye-hiah, isevice engcono,
I-Bamboo Ultrasonic Aroma Diffuser
100% Iphunga lemvelo lamafutha abalulekile, Iphunga lingenziwa ngezifiso